Munamato kuna Mutsvene Charbel. ? Kune Dzakaoma Nyaya, Rudo uye Vanorwara
Namata kuna Saint Charbel. Zvinonzi St. Charbel akakwanisa kupa tariro kudzoka kuna mai vadiki vairwara nechirwere chinotyisa. Nhoroondo inotiudza kuti mukadzi uyu akange arasa kutenda uye kuti rimwe zuva mupristi akamuraira kuti a munamato kuna saint charbel kukubatsira nedambudziko rako rehutano.
Nekudaro, mukadzi uyu akagutsikana kuti hapana munhu aiteerera minamato yake, mukuedza kwekupedzisira, iko zvino pasina simba, akasimudza munamato uyu uye akatambira chishamiso chaaive akamirira zvakanyanya.
Yakasimba, ine simba uye chishandiso chedu chete munguva idzodzo kana tariro dzichiita senge dzichinyangarika, munamato ndizvo zvese uye nezvimwe.
1 Munamato kuna Saint Charbel
1.1 Namata kuna Saint Charbel nyaya dzakaoma
1.2 Chishamiso chinamato kuna Saint Charbel cherudo
1.3 Munamato weSanta Charbel wevanorwara
1.4 Super chishamiso chinamato chebasa
Tisati tanamata munamato weSanta Charbel tinofanirwa kuona kuti uyu musande ndiani.
Taura nyaya yaive zita rake Youssef Antoun Maklim uye akaberekerwa muguta muRebhanoni muna 1828.
Akazvipira kuzvinamato, akazvipa kwachiri muviri nemweya uye aizivikanwa seMaronite uye paakapinda mune imwe yemamonasteries akagamuchira zita rekuti Charbel uye muna 1859 akagadzwa semupristi.
Kubva ipapo Akaenderera mberi nehupenyu hwake hwakazvipira zvakakwana pakutenda kwake, mumwe Mwari, kereke y l munamato. Muparidzi weshoko uyo aive zvakare ari traumatologist.
Kwemakore gumi nematanhatu aigara muSan Marón Convent uye akanganwa nezvemhuri, imba, shamwari uye nenyika yake.
Panguva yekufa kwake, vamwe vanhu vanoti kubva paguva rake, iro raive mune makuva eimba yake yemamongi imwechete, mwenje inoshamisa yakabuda, chinhu chakasara kwemazuva akati wandei.
Muhupenyu ndaive nechipo chekuporesa chakapihwa naMwari uye mushure mekufa kwake akaramba achiporesa vanhu.
Vatendi vakatanga kushanyira guva rake mushure mezuva rimwe chete paakabviswa nekuda kwemwenje, ivo vakaona kuti ganda rake raive ratsvaira uye ropa raibuda mumuviri wake.
Kubva panguva iyoyo kwave kune vanhu vazhinji vakagamuchira kurapwa kubva kuzvirwere zvakakomba.
Namata kuna Saint Charbel nyaya dzakaoma
Watsvene anokudzwa, akaropafadzwa Mutsvene Chharbel,
vakadaidzwa naMwari kuti vagare vari vega,
akazvitsaurira rudo chete kwaari,
uye nekuzvidemba uye nekushupika,
uye nekurudzirwa nechiedza cheYukaristi,
Wakatakura muchinjiko wako nokutsungirira uye kusiiwa,
vhenekera nzira yedu nekutenda kwako kukuru,
uye nemweya wako simbisa tariro yedu.
Saint Barbara anodikanwa mwanakomana waMwari,
iyo muyemmorm, kunze kwezvinhu zvese zvepanyika
nourombo chaihwo uye kuzvininipisa,
wakasangana nekutambudzika kwemuviri nemweya
Kupinda mudenga nekubwinya,
tidzidzise kutungamira matambudziko ehupenyu
nemoyo murefu nekutsunga,
uye mutinunure kubva pamatambudziko ese
Kuti hatikwanise kumira
Saint Barbara, anoshamisa musande
uye munyaradzi ane simba kune vese vanoshaya,
Ini ndinouya kwauri nekuvimba kwese kwemoyo wangu
kukumbira rubatsiro rwako nedziviriro mune ino yakaoma mamiriro,
Ndinokumbira kuti mundipe zvikuru nekukurumidza
izvo zvandinoda kwazvo nhasi,
Izwi rimwe kubva kwauri kuenda kurudo rwako, Jesu Anorovererwa,
Muponesi neMununuri wedu,
Zvakwana kuti Iye andinzwire ngoni
uye kupindura nekukurumidza kuchikumbiro changu.
iwe waida Holy Eucharist zvakanyanya,
kuti iwe wadya neIzwi raMwari
kuti iwe wakasiya zvese izvo
izvo zvinokuparadzanisa nerudo rweKumutswa Jesu Kristu
uye kuna Amai vake Vakaropafadzwa, Mhandara Maria,
usatisiye pasina mhinduro yakakurumidza,
uye tibatsireiwo kuziva Jesu naMariya zvakanyanya,
kuti kutenda kwedu kuwande,
kukushandira zvirinani uye nekunzwa izwi raMwari,
uye uite kuda kwake uye urarame parudo rwake.
Kubva pane yekutanga nyaya inozivikanwa yaamai vadiki avo vakagamuchira chishamiso chekuporesa pavakafunga kuti uye pakanga pasina tariro, uyu Musande ave muchishamiso pamatare akaoma, izvo zvange zvakafungwa kuti havana mhinduro.
Zvinoshamisa kunyange mushure mekufa kwake, nekuti kubva mumuviri wake zvinobva zvabuda mune oiri chinhu chine simba rake rekuporesa zvinoshamisa.
Chechi yeKatorike inochengetedza mvura iyi uye inozivikanwa sezvimedu zveSc Charbel, musande wematare akaoma.
Chishamiso chinamato kuna Saint Charbel cherudo
Munodiwa Baba Charbel, imi vanopenya senyeredzi inopenya mudenga reChechi, vanovhenekera nzira yangu, uye musimbise tariro yangu.
Ini ndinokukumbira iwe nyasha (...) Kundireverera pamberi paIshe akaroverwa, uyo waunogara uchinamata. Saint Charbel, muenzaniso wekutsungirira nekunyarara, ndinyorere ini.
Ah! Ishe Mwari, Imi makachenesa Musande Charbel uye mukamubatsira kutakura muchinjikwa wake, ndipeiwo ushingi hwekutsungirira matambudziko ehupenyu, nemoyo murefu uye nekusiiwa kuchido chenyu chitsvene, kuburikidza nekureverera kwaSanta Charbel, kuti Imi muve nyasha zvachose…
Ah! Baba vane rudo San Charbel, ndinotendeukira kwauri nekuvimba kwese kwemoyo wangu.
Saka kuti kuburikidza nekureverera kwako kune simba pamberi paMwari, unondipa nyasha dzandinokumbira kwauri ...
(isa yako odhi yerudo)
Ndiratidze rudo rwako zvakare.
Ah! Saint Charbel, gadheni rekunaka, ndireverere.
Ah! Mwari, Iwewe wakapa St. Charbel Nyasha dzekufanana newe, ndipe rubatsiro rwako, kuti ndikure muhunhu hwechiKristu.
Ndinzwireiwo ngoni, kuti ndigokurumbidzai nokusingagumi.
Wakafarira here munamato Chishamiso kuna Saint Charbel werudo?
Akasiya rudo rwevaviri, mhuri uye shamwari kuti azvipe iye yakachena kwazvo uye ine shungu yekuda Mwari.
Ichi ndicho chikonzero St. Charbel inogadzirwa zvikumbiro zverudo, nekuti iye kudarika munhu chero upi zvake anoziva rudo rwaMwari ndirwo ruchena rudo iripo.
Rubatsiro gadzirisa nyaya dzakaoma mumhuri uye kukwanisa kuwana rudo rwechokwadi, izvi zvisinei nekuti une tariro yakawanda sei kana kana yese yakarasika, iye inyanzvi mune zvisingaitike kesi.
Munamato weSanta Charbel wevanorwara
Ah! Holy Venerated.
Iwe, iwe wakapedza hupenyu hwako uri woga, mune anozvininipisa uye akazvibvisa hermrod.
Izvo iwe zvausina kufunga nezvazvo nyika kana mukufara kwavo.
Kuti iwe ikozvino ugere kurudyi rwaMwari Baba.
Tinokukumbira kuti utireverere, kuti Atambanudzire ruoko rwake rwakakomborerwa uye atibatsire. Vhenekera pfungwa dzedu. Wedzera kutenda kwedu.
Simbisai kuda kwedu kuti mupfuurire minamato yedu uye kuteterera pamberi penyu nevatsvene vese.
Oh Mutsvene Charbel! Kuburikidza nekureverera kwako kune simba, Mwari Baba vanoshanda zvishamiso uye vanoita manenji eshura.
Kuporesa vanorwara uye kunodzosera chikonzero kune vanovhiringidzwa. Izvo zvinodzosa kuona kune mapofu uye kufamba kune kune vakaoma mitezo.
Mwari baba Vemasimbaose, titarisei netsitsi, mutipewo zviye zviya zvatinokumbira imi, nekuda kwekureverera kwakasimba kweSanta Charbel, (Pano ita chikumbiro (s)) uye tibatsirei kuita zvakanaka uye kudzivisa zvakaipa.
Tinokumbira kureverera kwako nguva dzese, kunyanya paawa yekufa kwedu, Ameni.
Baba vedu, Rumbidzai Maria naGloria Saint Charbel vanotinyengeterera.
Tora mukana we simba remunamato unoshamisa kuna St. Charbel kwevanorwara uye kukumbira kunzwirwa tsitsi.
Saint Charbel akarohwa ndokuzozvinongedza sezviuru zvezviitiko zvinoshamisa kupote nyika zvinonzi kwaari.
Kubva pane chishamiso chake chekutanga chaakaratidza kuti Chipo chaakamboiswa kwaari chakange chisina kusiya muviri wake kunyange mushure mekufa kumwe chete.
Munamato weSt. Charbel wevanorwara unoshamisa, chechi yeCatholic inochengetedza humbowo hwevatendi gumi nevaviri avo vanoti vakagamuchira chishamiso kubva kuSt. Charbel uye mazuva ese vanowedzera dzimwe nyaya dzevanhu vakawanazve nekusimbisa kutenda kwavo nekuti yechimwe chezviitiko zvinoshamisa.
Super chishamiso chinamato chebasa
'Ishe Jesu, murevereri mumatambudziko ese akaoma, nditsvagirei basa randinozvizadzisa semunhu uye kuti mhuri yangu haishaye zvakakwana mune chero chinhu chehupenyu.
Chengetai zvisinei nemamiriro ezvinhu uye nevanhu vanopesana.
Kuti maari ndinofambira mberi ndichivandudza hupenyu hwangu uye kunakidzwa nehutano pamwe nekusimba.
Uye kuti zuva rega rega ndinoedza kubatsira kune avo vakandikomberedza uye ndinovimbisa kuparadzira kuzvipira kwako sechiratidzo chekutenda kwako nekuda kwenyasha dzako. '
Munamato uyu weSanta Charbel webasa une simba kwazvo!
Muzviitiko zvevashandi, iwe unogona zvakare kuenda kune uyu mutsvene anogona kutibatsira kugadzirisa mamiriro akaoma.
Mamiriro ezvinhu akaoma muhupenyu hwekushanda anogona kuva zviitiko umo mhinduro yakanyanya kungave yekurega uye kutsvedza pasina basa.
San Charbel anogona kutibatsira kuti tibve pane chero kusanzwisisika, zvakajairika munzvimbo dzekushanda, chero degree reiko rakaoma.
Minamato iyi ine simba uye mune idzi nyaya dzebasa zvinokurudzirwa kuti uzviite usati watanga zuva raizopa, nenzira iyi vibes yakaipa inobva yaenda uye hukasha hunogona kudzorwa kuitira kuti kana mamiriro ezvinhu akamuka anogona kubatwa nenzira kwayo .
Minamato kuna Saint Martin Knight